Ogaden News Agency (ONA) – Xoghaya guud ee OYSU faraca South Africa oo soo magacabay gudiga maamulkiisasii
Xoghaya guud ee OYSU faraca South Africa oo soo magacabay gudiga maamulkiisasii
Xoghayaha guud ee Ururka Dhalinyarada Soomalida Ogadenia (OYSU) Mudane Cabdinaasir Axbaab ayaa Galabnimadii Axada ku dhawaqay gudigii la shaqayn lahaa sanadka 2012. Mudane Abdinaasir oo Shirwaynihii ururka dhalinyarada OYSU ee Bishi hada dhamaatay 16 Kedii ka dhacay Magalada Port Elizaborth loogu doortay xoghayaha guud ee OYSU South Africa ayaa galabnimadii maanta Shir uu ku qabtay Magalada Johanisberg uu kaga dhawaaqay maamulkiisa OYSU-SA. Mudane Axbaab oo loo doortay 16 kii in uu noqdo Xoghayaha guud ee ururka Dhalinyarada Ogadenya ee South Africa ayaa mudadaa ku jiray wada tashi iyo ka fiirsasho si uu u soo magacawdo gudi taya leh ururkana meel wanaagsan gaadhsiin kara. Mudane Axbaab ayaa waxa uu tala & tusalaba ka qadanayay xubnaha ku baahsan gobalada kale uu ka kooban yahay wadanka South Africa oo ururka OYSU uu ku leeyahay xubno iyo waliba xafiisyo. Halgame Axbaab ayaa waxa uu ku guulaystay maanta oo shir uu ku qabtay xafiiska Dhalinyarada OYSU uu kuleyahay Johannesburg kuna magacabay 6ex ka mid ah gudiga maamulka guud ee South Africa.
Gudiga uu Xoghayaha ku dhawaaqay maanta oo ah maalin Axad ah ayaa waxa uu ka sugayaa in ay si wanagsan ula shaqeyaan gudigaas ururka OYSU South Africa oo uu noqdo mid meesha ugu wanagsan ka gaadha hawlaha loo xilsaaray sida inuu isku xidho dhamaan Dhalinyarada Somalida Ogadenia ee Koonfur Afrika ku nool iyo u adeegida dhamaan hawlaha halganka.
Ugu dambayntii Xoghayaha OYSU ayaa dhamaan xubnaha kula dar daramay in ay gacmaha is qabsadaan dad kooda iyo dalkoodana u huraan naftooda iyo malkooda si ay gumaysiga madow uga baxan.
Urur waynaha OYSU oo ah urur dhalinyarada Somalida Ogadenia ay ku midaysan yihiin ayaa lagu dhawaaqay sanadkii 2010 waxaana uu ku leyahay aduunka ugu yaraan 56 xafiis. Waa urur u tagan halganka iyo qadiyada Somalida Ogadenia & inuu ka shaqeeyo danaha iyo isku xirka dhamaan dhalinyarada.